एक क्रेडिट चेक के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki क्रेडिट चेक
एक क्रेडिट चेक के हो?
क्रेडिट को क्रेडिट या ऋण को ऋण को माध्यम ले बनाइयो क्रेडिट चेक अज्ञात र रेकर्ड गरियो। यदि तपाईं आफैलाई ऋण लिनुभयो वा ऋणको लागि आवेदन गर्नुहुन्छ भने, यो यो मामला हो। राज्यको क्रेडिट, कम्पनीहरू र तपाईले एक व्यक्तिको रूपमा सधैँ ऋणको लागी आवेदन गरेको छ। तपाईं उपभोक्ताको रूपमा यो समीक्षाको कुनै पनि कुरालाई ध्यान दिनेछैन, तर तपाईं यस विषयसँग ऋणमा तपाईंको क्रेडिट कार्डको अनिवार्य रूपले यस्तो परीक्षाको सामना गर्नुहुनेछ। तपाईं कत्तिको नगद छ र कसरी सुरक्षित देखिन्छ जस्तो लाग्छ कि तपाईले यो ऋण पुन: भुक्तान गर्दै हुनुहुन्छ? यो विषय हो जुन यो अवधारणा पछि लुकेको छ।
एक क्रेडिट को लागी ब्याज दर क्रेडिट जाँच को प्रभाव देखि प्रभावित छ
ऋण प्रस्ताव र बैंकको सम्बन्धित ब्याज दर अफरहरू क्रेडिट चेकबाट प्रभावित हुन्छन्। सामान्य प्रस्तावहरूले ब्याज दर निर्धारण गर्न दिशानिर्देशको रूपमा यो परीक्षणको उदाहरण प्रदान गर्दछ। उधारको खतरा यहाँ निर्धारण गरिएको छ। यदि तपाइँ ग्राहकको रूपमा उधारकर्ताको रूपमा कम जोखिम प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले यस ऋणको लागि सुधारिएको सर्तहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। पहिले नै उल्लेख गरिएको रूपमा, तथापि, एक बैंकको निश्चित ब्याज दरले यो उधारोपन जाँच द्वारा निर्धारण गरिन्छ। ब्याज दर प्रभाव भन्दा पनि बढी महत्त्व ऋण को अनुदान हो। यहाँ स्पष्ट रूपमा यो परीक्षण निर्णयको आधार हो। बैंकले क्रेडिट ब्यूरो प्रयोग गर्दछ, जस्तै Schufa डाटा वा Creditreform मा डाटा। बैंक तपाईंको बारे Schufa मा भन्डारित डेटा को जाँच गर्दछ, चाहे चुकौती र अपेक्षित जोखिम को रोकथाम को कुनै कारण हो। अर्कोतर्फ, क्रेडिट जाँचको समयमा एक व्यक्तिको स्कोरिङ गरिन्छ। यसमा अवस्थित स्थान र तपाईँको जन्मको मिति जस्तै डेटा समावेश छ। अवश्य तपाईंको अन्य सम्पत्तिहरू यो क्रेडिट मूल्याङ्कनमा समावेश गरिनेछ र तपाईंको आय यो आंकडामा समावेश गरिनेछ। यो स्कोर पनि आश्चर्य लाग्न सक्छ र नकारात्मक मामलामा तपाईं सामान्य ब्याज दरको रूपमा आधारभूत ब्याज दर प्राप्त गर्नुहुनेछ।
विस्तारमा क्रेडिट चेक प्रभाव पार्ने तथ्यहरू
अनपेड प्रत्यक्ष डेबिटहरू र ढिलो भुक्तान गरिएको मोबाइल फोन बिलले तपाईंलाई क्रेडिट जाँचको साथ मद्दत गर्न सक्छ क्रेडिट पहिले नै एक कष्ट हो। यी सम्पूर्ण डेटा, जस्तै तपाईंको निवासको ठाउँ र जहाँसम्म तिमी बस्ने सडकमा ऋण आवेदनको लागि धेरै सान्दर्भिक हुन सक्छ। बैंकिङ यो स्कोरमा निर्भर छ जुन तपाईंको विवरणमा विस्तार गर्न कठिन छ। तर यो सबै जानकारी स्थिरता प्रासंगिक छ। बैंकहरू आफ्नो प्रणाली प्रयोग गर्दछ, जुन बासेल4भनिन्छ। यहाँ, उधारकर्ताको इक्विटी अनुपात र अन्य महत्त्वपूर्ण डेटा विवरणमा गणना गरिन्छ। बैंकले यस जानकारी र क्रेडिट ब्यूरोबाट डेटा प्रयोग गर्दछ। यो उदाहरणको लागि यो एक उदाहरण हो, किनभने यदि तपाई आधिकारिक हुनुहुन्छ भने, तपाईको उच्च उर्जा र उच्च स्कोरिंग, नि: शुल्क अर्थव्यवस्थामा कुशल कामदार जस्तै। एक असल आय को बावजूद सुरक्षित भएका व्यक्तिहरु लाई सामान्यतया प्रासंगिक परीक्षण परीक्षा मा बैंक द्वारा वर्गीकृत गरिन्छ। यो आय मा व्यक्तिगत बोझको साथ गर्नुपर्छ, किनकि बैंकले यस तथ्याङ्कको मूल्याङ्कनको लागि सामान्य सांख्यिकीय डेटा प्रयोग गर्दछ। क्रेडिट चेक तपाईंको व्यक्तिगत वातावरणमा पनि विस्तार गरिएको छ। उदाहरणको लागि, तपाईंको सहरमा अवस्थित निवासको स्थान र भुक्तानी असहमतिको बारेमा तपाईंको क्रेडिट अनुरोधमा सामाग्री प्रतिकूल प्रभाव हुन सक्छ। क्रेडिटबृद्धि परीक्षण आंशिक रूपमा धेरै ग्राहकहरु द्वारा असंगत रूपमा मान्यता प्राप्त गरिएको छ, तर नियमहरू सामान्यतः क्रेडिट आकलनमा बाध्यकारी छन् र त्यहाँ अपवाद पनि छन्।